Indlela yasehlathini, iholide yeNasu, umlilo ovuthayo, ukubhobhoza kwamanzi, i-BBQ e-Azumaya, ukuphumla kwidesika, ukufudumala kwisitovu seenkuni.
Nasu, Nasu District, Tochigi, Japan
Nandipha Nasu, zeBBQ kunye nosapho lwakho, intetho jikelele Mtheza, sakusasa nge kumgangatho enkulu, ukufudumala esitovini iinkuni, ukunandipha usuku Nasu kunye nosapho lwakho ngeli indawo ezolileyo. Nceda ukhululeke.
Imizuzu eyi-10 ukusuka kutshintshiselwano lweNasu. Ikufuphi neNasu Kaido. Iivenkile ezidumileyo zegelato kunye ne-bagel zihamba ngomzuzu-10 (imizuzu emi-2 ngemoto). I-Aeon Town Nasu yimizuzu eli-10 yokuqhuba, ukwenza ukuthenga kube lula. Kukho iivenkile ezinkulu, iivenkile ze-yen ezili-100, kunye neevenkile zokuphucula amakhaya apho unokuthenga igrosari kunye nezinto eziyimfuneko zemihla ngemihla ngamaxabiso aphantsi. Ngokuxhomekeke kwixesha lonyaka, unokuthenga iinkuni kwivenkile yokuphucula ikhaya.
Sineetawuli zokuhlamba, iitawuli zobuso, iiseti zebrashi yamazinyo, kunye nabantu abaninzi kangangoko uthanda.
Sineshampu, iconditioner, isepha yomzimba, isomisi seenwele, kunye nebhafu.
[Malunga neebhodi eziphantsi]
Iiplanga ezisezantsi zale villa zenziwe ngamaplanga aqinileyo. Nceda uve ubushushu. Ukongezelela, i-slippers ayibekwanga ukwenzela ukuba uzive ukufudumala kwendalo. Ukuba ucinga ukuba ufuna i-slippers, nceda uzilungiselele.
[Malunga nomlilo webhon kunye nesitovu seenkuni]
Ukuba ungathanda ibhonfire / isitovu seenkuni, nceda usazise ngexesha lokubhukisha. Siza kulungisa iinkuni ocinga ukuba uyazifuna, iinkuni zokubasa, kunye nesixhobo sokutshisa.
[Malunga nendawo yokupaka]
Kukho isithuba malunga 4-5 iimoto.
1 ibhedi elala abantu ababini, iibhedi ezilala umntu omnye eziyi-2, imatrasi ebekwa phantsi eyi-1
Inombolo yomthetho: M090029995
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Nasu, Nasu District